DxOMark သည် Moto X Style ကို iPhone6Plus | ပေါ်တွင်တင်ထားသည် Androidsis
DxOMark သည် Moto X Style ကိုအကောင်းဆုံးကင်မရာဖြင့်တတိယမြောက်စမတ်ဖုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်
benchmarks အမြဲဆွေမျိုးဖြစ်ကြသည် ထို့အပြင်သူတို့သည် DXOMark ကဲ့သို့ပိုမိုကောင်းမွန်သောရမှတ်များရှိသောကြောင့် CPU ၏အပြောင်းအလဲမြန်နှုန်းသို့မဟုတ်ကင်မရာသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးလျှင်တိကျသောရလဒ်ကိုဘယ်တော့မျှပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားယေဘူယျအကြံဥာဏ်ရရန်သို့မဟုတ်အလင်းနည်းသောအခြေအနေများတွင်ဖမ်းယူသောအခါကျွန်ုပ်တို့မျက်စိနှင့်မြင်တွေ့ခဲ့ရာကိုအတည်ပြုရန်ကူညီသော်လည်း၎င်းသည်များသောအားဖြင့်တူညီသောစမ်းသပ်နေရာဖြစ်ပြီးကင်မရာမည်သို့ပုံဆောင်သည်ကိုသိရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ Moto X စတိုင်သည်ကင်မရာ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးရှိအရည်အသွေးအားလုံး၏အရည်အသွေးများစွာကြောင့်ပေးထားသောရလဒ်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအံ့အားသင့်စေခဲ့လျှင် DxOmark မှာ iPhone6Plus ပေါ်မှာထိုင်တယ် နှင့်တတိယအကောင်းဆုံးကင်မရာဖုန်းအဖြစ်။ ဤအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အံ့ thing စရာကောင်းသည်မှာ DxOMark အခြေခံစံနှုန်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းစမ်းသပ်မှုများကိုစတင်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသော်လည်းဤတစ်ကြိမ်တွင်ဤ Moto X ၏ကင်မရာ၏စွမ်းရည်နှင့်အရည်အသွေးကိုတွေ့နိုင်သောနေရာတွင်ချက်ချင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အကောင်းဆုံးဖုန်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် Moto X Play ၏.
1 Galaxy Note4နှင့်လက်ချင်းချိတ်ပါ
2 DxOMark စမ်းသပ်မှုများ
Galaxy Note4နှင့်လက်ချင်းချိတ်ပါ
DxOMark တွင် Moto X စတိုင်လ် Samsung Galaxy S6 အစွန်း၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိပြီး Galaxy Note4နှင့်အတူ ဦး ဆောင်သည်။ ၎င်း၏အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုက iPhone6Plus အားပဉ္စမနေရာသို့ရောက်သွားသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမသုံးသပ်မီ LG G4 သည်ဤစံသတ်မှတ်ချက်တွင်မပါ ၀ င်သောကြောင့်မည်သည့်အနေအထားတွင်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကင်မရာ၏အရည်အသွေးကောင်းကိုငြင်းပယ်ရန်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်တော်တို့ကင်မရာအမျိုးအစားထဲကအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းတွေအကြောင်းပြောနေတာကိုသတိရပါ။
Moto X စတိုင်မှာနောက်ကင်မရာပါရှိပါတယ် လက်ကိုင်ဖုန်းရှိသင့်တဲ့အရာအားလုံးရှိတယ်OIS ကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည် (optical image stabilization) ။ 21 MP အာရုံခံကိရိယာ၊f/ 2.0 aperture၊ ကျယ်ပြန့်သောထောင့်၊ Phase detection AF, Dual Color အပူချိန် Flash နှင့်ဗီဒီယိုတည်ငြိမ်မှုအနည်းငယ်ကိုဖော်ပြပါ။
အာရုံခံကိရိယာမှာ Sony IMX230 ဖြစ်သည် သင်၏ဆိုဒ်ကို Sony စမတ်ဖုန်းတွင်ရှာရန်မလိုသေး နှင့်ဤဝိသေသလက္ခဏာများသယ်ဆောင် Moto X စတိုင်လ်ကိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်.
Moto X စတိုင်လ် ဓာတ်ပုံအပိုင်းမှာ ၈၃ ရမှတ်ယူပါနှင့် iPhone6Plus ကိုယ်နှိုက်က 84 မှတ်သို့ရောက်ရှိ။ Moto X Style ၏ဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာ Flash အောက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြင်ပပုံရိပ်များနှင့်မည်သည့်အလင်းအမျိုးအစားတွင်မဆို autofocus စျေးနှုန်းထက်သာလွန်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်အကျွံထိတွေ့မှုနှင့် autofocus တည်ငြိမ်မှုကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
ဗွီဒီယိုတွင် Moto X စတိုင်သည်ထင်ရှားပြီးနေရာများစွာရှိသည်။ ပုံမှန်နှင့်အနိမ့်အလင်းအခြေအနေများတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတည်ငြိမ်စေခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ အဆိုးဆုံးကတော့ autofocus သည်အလင်းနည်းသောအခြေအနေများတွင်နှေးကွေးပြီး flash သည်အချို့သောအရောင်များကိုထုတ်ပေးသည်။ 1200MB တစ်ခုစီတွင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကင်မရာနမူနာများသည် 800 × 1 အထိလျှော့ချခဲ့သည်
ဓာတ်ပုံတွေဘယ်လောက်မြန်မြန်ယူသွားတာလဲငါတို့မသိသေးဘူး, ဒါပေမယ့် Motorola ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း Samsung နှင့်အတူအခြားလက်၌ရှိ၏။ Snapdragon 808 chip၊3GB RAM၊ ၅.၇ လက်မ QuadHD မျက်နှာပြင်နှင့် micro SD slot တို့ကိုယူရို ၃၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသောဤဖုန်း၏ဓာတ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရမည်မှာသေချာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Motorola က » DxOMark သည် Moto X Style ကိုအကောင်းဆုံးကင်မရာဖြင့်တတိယမြောက်စမတ်ဖုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်
Moto G 2014 နှင့် Moto G 2015 အကြားနှိုင်းယှဉ်ခြင်း
Moto X Play၊ ပြီးပြည့်စုံသော Android စမတ်ဖုန်း